Sihlalutya inkxaso ye-iPhone kunye ne-Apple Watch ye-Oittm | Iindaba zeGajethi
Iigadget sisizathu sale webhusayithi yethu, yiyo loo nto amaxesha ngamaxesha sithanda ukukuzisa iimveliso ezininzi ezinokwenza ubomi bakho bube lula, okanye ubuncinci bube lula. Ngeli xesha siza kuthetha ngemveliso ejolise kwabo basebenzisi bane-Apple Watch kunye ne-iPhone okanye i-iPad. Kwaye iApple ayibandakanyi kwezi zixhobo isiseko sokutshaja esiba luncedo kakhulu xa zombini ezi zixhobo ziyipropathi yethu. Namhlanje siza kuthetha ngesiseko sokutshaja se-Oittm ye-iPhone kunye neApple Watch.
Ezi zixhobo zincinci zihlala zihlala zisinika intuthuzelo eyongezelelweyo, nangona kunjalo, zihlala zitshiphu zibiza kakhulu, ke kubalulekile ukuba Kwisixhobo se-Actualidad siyakukhumbula ngenxa yophononongo lwethu lweenjongo zomgangatho wamacandelo alo Kwaye ukuba ngenene banika oko bakuthembisayo.
Njengesiqhelo, siza kuthatha ukhenketho lwezona zinto zibalulekileyo ekufuneka sizithathele ingqalelo kuphononongo, kwindlela edityaniswa ngayo izinto zayo, kuyilo kunye nomgangatho wazo. Kodwa eyona nto ibaluleke kakhulu kwiimeko ezininzi kukuba usinike inkonzo ngokuchanekileyo, Isiseko sokutshaja se-Oittm sinesibonelelo esingaphezulu kwesinye, kwaye sifuna ukuba ngaphezulu kakhulu kokuhomba kwindawo yethu yokuma ebusuku. Uyazi, ukuba ufuna ukuya ngqo kumanqaku anomdla, yenza uninzi lwesalathiso sethu.
1 Uyilo kunye nezinto zesiseko se-Oittm LOPOO
2 Indibano kunye nokusebenza
5 Amava omsebenzisi kunye namaxabiso
Uyilo kunye nezinto zesiseko se-Oittm LOPOO
Kwi-Oittm into ekufuneka igcinwe engqondweni kukuba bazama ukudibanisa ngokupheleleyo iimveliso zabo kunye noyilo kunye nemibala esiyinikwa yinkampani yeCupertino ngokwayo. Ngale nto sithetha ukuba bayayazi indlela yokudibanisa imibala yemibala kunye nezinto zabo ngendlela yokuba zingaphumi kwiskimu kwaye zisinike umbono wokuqhubeka., Siyaqonda ukuba ukusuka kwiisilicones ukuya kwiiplastikhi ziyilelwe kwaye zidityaniswe ngokupheleleyo noyilo lwezixhobo zethu. Kuyinyani ukuba sifumana iziseko ezininzi ezakhiwe nge-silicones, i-aluminium kunye neeplastikhi, kodwa apha asizukufumana iimveliso ezisisiseko, yonke into inombala, uyilo kunye nokumila umntu anokulindela ukuba kwenzeke kwimveliso eyilelwe ukudibanisa imeko ye-Apple, kwaye oko kuyabulelwa kakhulu.
Isiseko sikhulu kwaye siphezulu, kodwa asonelanga ukuba sicaphukise, akukho nto iqhubekayo kwinyani, isinika uzinzo olongezelelekileyo oluya kusivumela ukuba sishiye izixhobo zethu zihleli ngaphandle koloyiko, into endingenakukuthetha ngezinye iziseko ezininzi kuvavanywa. KUNYENgokubanzi siza kuzifumanela iisentimitha eziyi-3,75 ukuphakama kunye neesentimitha ezingama-20 ubude, kukho indawo eninzi kwisixhobo sethu ngaphandle kokuba hulk. Mhlawumbi kuyinyani ukuba inokuba ingaphantsi kancinci, kodwa inombane wayo oqhelekileyo, ozisa ingqiqo kubude bayo.
Isiseko sakhiwe kwi-aluminium efanayo kumbala onikezelwa yi-Apple, kunye nenkxaso yangemva ye-iPhone. Okwangoku, indawo ephezulu apho izixhobo zibekwe khona yiplastiki emhlophe, ngokuhambelana nezixhobo zethu isilivere isuka kwiApple, kodwa sikwanentlanganisela Indawo eMnyama. Inesibingelelo se-iPhone apho kuvela khona intambo yombane, enesikhuselo esirhabaxa sokuthambisa kwithoni efanayo neentambo ezisemthethweni zeApple. kwaye iyakukhusela ezantsi kwe-iPhone yethu nakweyiphi na imikrwelo. Kwelinye icala, isithsaba apho siza kushumeka khona itshaja ye-Apple Watch sigutyungelwe ngaphakathi ngaphakathi kwaye siza kuhlala sikwindawo esisigxina nesisigxina esiya kusivumela ukuba sisebenzise iApple Watch kwimowudi itafile esecaleni kwebhedi.
Indibano kunye nokusebenza
Siqala ngendibano, kuba ichweba alichithwanga ngokupheleleyo. Nangona kunjalo, ukulandela imiyalelo kumanyathelo amane kuphela uya kuyifumana ikhona ukuze usebenze. Isembozo esimhlophe esingaphezulu sahlulwe kwisiseko sealuminium kwaye apho siya kufumana izikhokelo zeentambo. Ngokwengqondo ezi zikhokelo zineziphatho ezinokonakalisa intambo yakho esemthethweni ye-Apple, ke ndicebisa ukuba zibanyanzele ukuba bavule ngaphambi kokufaka intambo yombane ngazo. Siza kuba nomngxuma ngaphakathi apho siza kubeka khona intambo ye-Apple Watch kunye nonxibelelwano lwangaphakathi lwe-USB oluya kusivumela ukuba sibeke ezi ntambo ngaphakathi ngaphandle kokungena endleleni. Ngokususa iintambo ngokusebenzisa izikhokelo kunye nokufaka uqhagamshelo kwiimodyuli ezisuswayo ze-iPhone kunye ne-Apple Watch, yonke into iya kwenziwa, ukubeka i-iPhone yokuphumla kufuneka sibuye sijike isixhobo sokujija.
Sele siyifakile, kodwa ayisiyiyo yonke, ngasemva Sifumana unxibelelwano lwamandla olusemgangathweni ngentambo yonxibelelwano ebandakanyiweyo, ehamba kunye nokunxibelelana kwe-USB ezintathu kunye ne-amperage eyaneleyo (2.1A) ukutshaja izixhobo ezinje nge-iPad, ke ngaphandle kweengxaki uya kuba neetshaja ezintlanu kwelinye kunye namandla alunge kakhulu. Kungenxa yoko le nto isiseko sokutshaja se-Oittm sisisitishi esipheleleyo esiya kuthi sisinike into eluncedo kakhulu kunokuba bekulindelwe. Ii-USB ezintathu zangasemva ziyahambelana nayo nayiphi na inkqubo yokutshaja ye-USB, akusayi kubakho mfuneko yokuba sihlawulise nasiphi na isixhobo se-Apple ngazo. Kufanelekile ukuba ukhumbule ukuba esi siseko sokutshaja asizi naziphi na iintambo zokutshaja ngaphandle kwamandla alo, ke kuya kufuneka usebenzise ezakho iintambo. Kuyingxaki ukuba unayo kuphela imigangatho, kuba xa useluhambweni kuyakufuneka uzisuse, nangona inkqubo yokufaka ikhebula ikhawuleza kwaye isebenza kakuhle, iyaxabiswa, ayifani nezinye iziseko endizizamile nezidikiweyo.
Isiseko sokutshaja se-Oittm (Bukela kunye ne-iPhone)
Into ebiza kakhulu
Isikhokelo sekhebula siqinile
Amava omsebenzisi kunye namaxabiso
Amava am omsebenzisi ebelungile ngenene, ndibiza iApple Watch yam kunye ne-iPhone yam yonke imihla, Ngelixa ndithatha ithuba kolunye lonxibelelwano lwayo lwangaphambili ukutshaja i-iPad amaxesha ngamaxesha. Kufanelekile ukuba ube sisiseko sakho sokutshaja rhoqo, njengoko ungayi kuswela ukusebenza. Njengengongoma engathandekiyo ndigxininisa umba wokungabandakanyi intambo yokutshaja, nangona ngexabiso kunye nokuthathela ingqalelo izithintelo iApple edla ngokuba nazo ngeentambo, phantse kube ngcono. Ngamafutshane, isiseko sokutshaja endisicebisayo, nangona amaxabiso asenokuba sezantsi ngokucacileyo.
Ungasifumana isiseko sokutshaja seApple Watch kunye ne-iPhone ukusuka kwi-Oittm eAmazon ukusuka kwi-euro ezingama-34,99 LE LINK. Nangona kunjalo, ukuba usebenzisa ezi khowudi zilandelayo zesaphulelo uya kuba nakho ukonwabela imveliso ngexabiso eliyinyani, kwaye njengesipho uyakufumana imeko yePC yeApple Watch:
Le khowudi ilandelayo ofumana ngayo Ixabiso lokugqibela le- $ 27,99 : R8S9NOK6 (-20%)
Ikhowudi yesipho sekhava: 9IVWHNNT
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Sihlalutya inkxaso ye-Oittm ye-iPhone kunye ne-Apple Watch